उमेर बढेपछि केकीकाे लाेभ बढ्याे ! – Hotpati Media
उमेर बढेपछि केकीकाे लाेभ बढ्याे !
२३ भाद्र २०७६, सोमबार २२:१३ मा प्रकाशित (4 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ७ मिनेट
काठमाडाैं-‘एक्सप्रेसन क्विन’ को रुपमा चिनिएकी केकी अधिकारीलाई भाग्यमानी अभिनेत्री भन्ने गरिन्छ । उनी अभिनीत फिल्म बक्सअफिसमा सफल नभए पनि व्यस्तता भने अहिलेकी चल्तीको अभिनेत्रीको भन्दा कम छैन । जीवन्त अभिनय गर्ने भएकै कारण उनको हातमा फिल्मको कमी छैन । भिडियोमा पनि उनको डिमान्ड राम्रो छ । सरल व्यबहारका कारण पनि उनी कामविहीन हुनु नपरेको कतिपयको तर्क छ ।
गुणस्तरमा नभइ संख्यात्मक अभिनयमा जोड दिँदा उनले बचेखुचेको क्रेज चौपट बनाइसकेकी छन् । एक समय उनलाई राम्रो सम्भावना बोकेको अभिनेत्रीको रुपमा हेरिएको थियो । किनकि, उनको अभिनयले दर्शकको मन जित्ने गरेका थिए । तर, फिल्मले निराश बनाउने श्रृंखला नरोकिएपछि अहिले उनी हातमा आएका जस्तासुकै फिल्म पनि आँखामा पट्टी बाँधेर गर्ने गरेकी छन् ।
पछिल्लो समय उनी अभिनीत फिल्म हलमा लागेको र उत्रिएको समेत थाहा हुन छाडिसकेको छ । तात्तातो उदाहरण हो, फिल्म ‘रातो गलबन्दी’ । यो फिल्मले भित्तामा पोस्टर टाँस्नका लागि बनाएको माडको पैसा समेत उठाएन । न त दर्शकलाई फिल्म हलमा लागेको र उत्रिएको नै थाहा भयो । किन फिल्म छनोटमा गम्भीर हुन सकेकी छैनन्, उनी ? के उनमा करिअरप्रति चिन्ता नै नभएको हो ?
अभिनेत्री केकीको नयाँ फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ आउँदो असोज २४ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ । यो दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौला समुहले निर्माण गरेको फिल्म हो । यसकारण उनलाई यो फिल्मप्रति निकै ठूलो अपेक्षा छ । करीब १ दशक लामो फिल्मी करिअरमा सोलो हिरोइनको रुपमा एउटा हिट फिल्म दिने सपना यसले पूरा गर्नेमा उनी विश्वस्त छिन् । दर्शकलाई पनि यो फिल्मकोे प्रतिक्षा छ ।
फिल्म ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ निर्माण गरेर आफूलाई निर्मात्रीको रुपमा पनि चिनाइसकेकी उनको मुखमा आजभोली ‘लोभ’ भन्ने शब्द निकै झुण्डिने गरेको छ । यसको कारण के होला ? आइतबार फिल्म ‘सेल्फी किङ’ को निर्माण घोषणा सभामा उनले उमेर बढ्न थालेपछि स्वतस्फूर्त रुपमा लोभ पनि बढ्दै जाने बताइन् । आजकाल आफूलाई निकै लोभ लाग्ने गरेको उनको भनाई छ ।
‘लोभ’ बढ्नुको कारणबारे प्रस्ट्याउँदै उनी भन्छिन्, ‘मलाई लोभ लाग्ने भनेको कामको हो । बाँकी त संसारमा सबै चिज नाशवान छ । मृत्युपछि हामीले केही चिज लिएर जाने होइन । तर, काम र नाम भन्ने चिज सधैं रहिरहन्छ । त्यसैले मलाई त्यही चिजको लोभ लाग्छ ।’ विशाल सापकोटाले निर्देशन गर्ने ‘सेल्फी किङ’ मा उनले आइटम गीतमा नृत्य प्रस्तुत गर्दैछिन् । उनी यो फिल्मलाई लिएर आफू निकै उत्साहित रहेको बताउँछिन् ।